व्यापक खोज, सावधान विश्लेषण मार्फत प्राप्त मेरो आफ्नै अनुभव साझेदारी मलाई गरौं। हाल नै खरिद आवास जाने, यो सबै दायाँ यहाँ थियो, हरेक विवरण, आदि मनमोहक हुनेछ, म एक maximalist छु भएकोले म मरम्मत काम venturing भने, त्यसपछि यो साँच्चै शक्तिशाली मरम्मत होस् निर्णय गरे। तर, यो को म बिजुली आपूर्ति स्थापना केन्द्रित हुनेछ किनभने प्रत्येक चरण, बोरिंग र धेरै लामो हुनेछ विचार गर्नुहोस्। यसलाई देखिन्थ्यो रूपमा, मर्मत सबैभन्दा समय-खपत चरण यो, पहिलो छ र। पहिलो, म प्रकाश उपकरण को एक ठूलो विकल्प छनौट गर्न थियो, घरेलू बजार मा छैनन्। मैले हेरे जो कुनै पनि नयाँ विद्युत दोकान, उनको कुरा रोचक प्रस्ताव राखे। अन्तमा, थकित प्राप्त तीन दिन मन अलि खाली जो पछि समय-बाहिर लिन म निर्णय, म किनमेल सुरु भयो। LEGRAND मा आँखा किनभने एल्यूमीनियम मामला, र भित्री द्वारा सजाया कुनै पनि फ्रेम, चयन गर्न सक्ने क्षमता जस्तै, फ्रान्सेली कम्पनी बाट स्विच। म एक-रंग एल ई डी झाड भेट्न, ब्याकलाइट नीलो रंग स्विच लिए। तिनीहरूले सेट थिए भने, मधुर स्वर, धेरै रोचक थियो।
तपाईं एक स्टूडियो अपार्टमेन्ट छन् भने, दृढता तपाईं संग स्विच लिन सल्लाह एक गति सेन्सर। के कारणले? सबै धेरै सजिलो। आवास स्थान योजना को यो विधि स्विच पत्ता लगाएर अपेक्षाकृत ठूलो आकार हुन्छ संग, तपाईं अन्धकारमा कोठा भरि सार्न गर्न आवश्यक छ। को पाठ्यक्रम, तपाईं केहि देख्नुहुन्न गर्दा, तपाईं गल्ति एक फूलदान वा अन्य संवेदनशील वस्तुहरु, एक स्विच जस्तै त व्यक्तिगत मेरो घर छ overkill तर अत्यन्तै व्यावहारिक छैन उत्पादन गरे धक्का गर्न सक्नुहुन्छ। सायद सबै भन्दा कठिन, विद्युत प्रणाली ताराहरु को स्थापना को समयमा विस्तार अवधि तार नेटवर्क भयो। ईटा प्राविधिक Stroebe मा भएको थियो को विपरीत, म एक केबल च्यानल द्वारा तार रक्षा बाहेक अन्त निर्णय। विक्रेता कि, हुँदा पनि क्षेत्रीय च्यानल रोशनी मलाई आश्वासन बाहेक Corrugation, साना चौडाई थियो। केबल मार्ग एक 30 प्रतिशत शक्ति आरक्षित संग चयन गरिएको छ। विद्युत ताराहरु लागि Ducts, जो को मूल्य एक वेब-सानो घर मा आनंद से छक्क, माथि लामो समय छानिएको छ।
स्थापना को अन्तिम चरण ताराहरु शक्ति तार बनेको छ जब रोशनी को लागि केबल, म एक कम्प्युटर आउटलेट थप्न स्वाभाविक एक भवन केबल इन्टरनेट प्रदायकलाई आउँछ कसरी अग्रिम अनुरोध गर्ने निर्णय गरे। प्रत्येक पर्खाल, गरे सकेट सफासँग को Drywall एक recess लुकेका कि एक प्रणाली Svicha प्रयोग संग संयुक्त मा। यो कि जानकारी आउटलेटहरू मा नै समय फर्नीचर पछि तिनीहरूलाई राखिएको, अपार्टमेंट को भित्री बिगार्छ थिएन बाहिर गरियो। विद्युत स्थापना सकिएपछि, पर्खालहरु म स्विच किन्न पसलमा गए, एक प्रकारको प्राप्त गरेको छ। उल्लिखित रूप मा, छनोट एल्यूमीनियम मोडेल गम्भीर प्रतियोगी ग्रेफाइट छ किनभने मलाई, एक कठिन प्रश्न थियो पनि अघि, LEGRAND मा परे। ग्रेफाइट स्विच धेरै आकर्षक देखो, तर अझै पनि तिनीहरूले भित्री को सौंदर्य को मामला मा राम्रो हो, किनभने पहिला रोक्न थियो।
सेकेन्ड "रीओ" (लेनिन, मास्को): सिंहावलोकन, सेवा र अतिथिहरूको समीक्षा
राष्ट्रिय कार वोक्सवैगन को गम्भीर प्रतिनिधि - AVILON
नेभिगेसन संग स्थापित कार रेडियो
मास्को मा Pokrovsky बजार
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा "Milavitsa" - जहाँ तफसील किन्न?
राशिफल विशेषताहरू: पुरुष मकर-रोस्टर - के यो हो?
"आगो सुरक्षा" मा रोचक शिल्प
तार स्पिनिङ - सही विकल्प
Tonsillectomy - पूर्ण गलसुए हटाउन सर्जरी: सङ्केत गर्छ, contraindications, प्रभाव
लक्षण, खतराबाट र उपचार: कुकुर मा Ringworm
तनाव गेज: वर्णन, प्रयोग, विशेषताहरु र मूल्यांकन लागि निर्देशन
Zhigulin Anatoliy Vladimirovich: जीवनी